Trafikana sokatra Mpitandro filaminana iray indray no tratra
Mpitandro filaminana niala ilany tamin’ny sokatra 6 nentiny no voasambotra, raha nametraka sakana teny Ankodoana amin’ny fidiran’ny tanàna atsimon’i Fianarantsoa amin’iny lalam-pirenena fahafito iny ny polisy.
Ny alin’ny talata tokony tamin’ny 9 ora no nanao fisavana fiara taksiborosy iray avy any Toliara ny polisy. Rehefa nojerena ny entana dia nahitana sokatra tao anaty «kitapo» iray izay miisa 6 ary misarona tamina akanjona mpitandro filaminana. Raha variana nisava entana iny no nisy olona iray nanararaotra nitsoaka ary tsy lasa lavitra dia tra-tehaka ity farany. Nentina natao fanadihadiana teny amin’ny paositry ny polisy izy ka rehefa natao ny famotorana dia fantatra fa mpitandro filaminana miasa eto Antananarivo.